Qayb Qayb Ka Buuxsantay & Wershada Dabeecadda Qulqulka Kanaalka Furan |Shiinaha Qayb ahaan Buuxiyey Dhuumaha & Soo-saareyaasha Flowmeterka Kanaalka Furan, Soo-saareyaal
PT1000 wakhtiga gaadiidka mitirka socodka ultrasonic ee biyaha kulul
DN65-DN6000 ahamaama birta waqtiga gaadiidka ultrasonic ...
galinta gidaarka rs485 modbus ultrasonic liqui...
gelinta dhijitaalka ah ee socodka socodka laba jiho ee ultrasonic...
Gacan-ku-wareejinta-waqtiga-socodka Ultrasonic Flowmeter TF1100-EH...
Darbiga-ku-xidhan Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF110...
Dhuumaha Qayb ahaan Buuxsan&Muuqaalka socodka kanaalka Furan
DOF6000-P Taxanaha La Qaadan karo
Qalabka socodka DOF6000 wuxuu ka kooban yahay xisaabiyaha socodka iyo Ultraflow QSD 6537 Sensor.
Ultraflow QSD 6537 Sensor waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro xawaaraha biyaha, qoto dheer, iyo dhaqdhaqaaqa biyaha qulqulaya webiyada, durdurrada, kanaalada furan iyo tuubooyinka.Marka lagu isticmaalo wehel Lanry DOF6000 Xisaabiyaha, heerka socodka iyo wadarta socodka sidoo kale waa la xisaabin karaa.
Xisaabiyaha socodka waxa uu xisaabin karaa isgoysyada qaybaha tubada qayb ahaan buuxsantay, kanaalka furan ama webiga, ee durdurrada ama webiga, oo leh ilaa 20 dhibcood oo isku xidha oo qeexaya qaabka webiga qaybtiisa isgoysyada.Waxay ku habboon tahay codsiyada kala duwan.
UOL Serials Fur mitirka kanaalka
Taxanaha UOL waa mitir socodka qulqulka kanaalka furan ee ultrasonic ee aan lala xidhiidhin, oo leh aag indho la'aan ah, dareen sare, xasilooni sare.Waxay ka kooban tahay baaritaanka ultrasonic iyo martigeliyaha, inta badan loo isticmaalo cabbirka waraabka ilaalinta biyaha, dhirta bulaacadaha, shirkadaha iyo machadyadations ee heerka socodka qulqulka bulaacadaha, bulaacadaha magaalada iyo ganacsiga kiimikada qayb ka mid ah cabbirka socodka.
DOF6000-W Taxanaha Darbiga-ku-xidhan
Dhuumaha Qayb ahaan Buuxsan & Qulquliyaha Kanaalka Furan DOF6000
Qalabka socodka DOF6000 wuxuu ka kooban yahay xisaabiyaha socodka iyo dareeraha Ultraflow QSD 6537.
Ultraflow QSD 6537 Sensor waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro xawaaraha biyaha, qoto dheer, iyo dhaqdhaqaaqa biyaha qulqulaya webiyada, durdurrada, kanaalada furan iyo tuubooyinka.
Marka lagu isticmaalo wehel Lanry DOF6000 Xisaabiyaha, heerka socodka iyo wadarta socodka sidoo kale waa la xisaabin karaa.
Ultrasonic Doppler PrincipleQaabka Muunada Quadrature waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyocabbir xawaaraha biyaha.Qalabka 6537 wuxuu u gudbiyaa tamarta ultrasonic iyada oo loo marayo daboolka epoxy ee biyaha.Qaybaha wasakhda ah ee la laalay, ama gaaska yaryar ee biyaha ku jira ayaa ka tarjumaya qaar ka mid ah tamarta ultrasonic la kala qaado oo dib ugu soo noqota 6537 Instrument's qalab-qaade ultrasonic kaas oo ka shaqeeya tan la helay oo xisaabisa xawaaraha biyaha.